အခမဲ့ Firefox ကိုဒုံးပျံ Download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Firefox ကို Rocket - မြန်နှင့် Lightweight
Firefox ကို Rocket - မြန်နှင့် Lightweight APK ကို
Firefox ကိုဒုံးပျံ, အင်ဒိုနီးရှားများအတွက်အထူးသရာ၌ပေါ့ပါး, လျှပ်စီးအစာရှောင်ခြင်း browser ကိုဖြည့်ဆည်း။ ကျနော်တို့နေရာနှင့်အချက်အလက်များကုန်ကျစရိတ်ချွေတာဘို့စမတ်ဖြေရှင်းနည်းများကိုပိုမိုမြန်နှုန်းဘို့လိုအပ်ကြောင်းထံမှ, သင်သည်သင်၏ဖုန်းတွင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ trickiest ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းပေးခဲ့သည်။ တဦးတည်းလက်မနှင့်အတူတစ်ခုလုံးကိုအတွေ့အကြုံကိုမှတဆင့်ပိုမြန် Browse နှင့်ကြော်ငြာကိုပိတ်ဆို့သင် Turbo Mode ကိုအတူကမှာနေနေစဉ်, အကြာတွင်ဖတ်ရှုဖို့တပြင်လုံးကိုဖန်သားပြင်ကယ်တင်နှင့်ညေ။ , လွတ်လပ်စွာအင်ဒိုနီးရှား Browse ။ အပေါ် Browse ။ Mozilla ကမှာသင်၏မိတ်ဆွေများအားဖြင့်သင်တို့ကိုမှဆောင်ခဲ့ကြ၏။ပေါ့ပါးခြင်းနှင့် Lightning မြန်
အဆိုပါမယုံနိုင်လောက်အောင်သေးငယ်တဲ့ဖိုင်အရွယ်အစားကသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာနီးပါးမျှအာကာသကိုတက်ယူဆိုလိုသည်။ ထိုအ Turbo Mode ကိုလျှပ်စီးအစာရှောင်ခြင်း browsing နဲ့ဒေါင်းလုတ်ဆွဲဆိုလိုသည်။
ဒေတာများကို Save - နှင့်ငွေသား
Turbo Mode ကို, အရာလုပ်ကွက်မလိုချင်တဲ့ကြော်ငြာတွေနှင့်ခြေရာခံနှင့်အတူဒေတာကုန်ကျစရိတ်အပေါ်သိမ်းဆည်းပါ။ ကဘာလဲဆိုတာ ပို. ပင်ကယ်တင်? သငျသညျ browse နေစဉ်ပုံရိပ်ကိုပိတ်ဆို့ခြင်း Enable လုပ်ထားပါ။
နှစ်ခုဘုံဘိုင်, သင်အော့ဖ်လိုင်းဖတ်ရှုဖို့တပြင်လုံးကိုမျက်နှာပြင်ကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။ ထိုအခါက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ကိုအလိုအလျောက်လည်းသိမ်းဆည်းဒါကြောင့်သင်လုပ်ချင်တဲ့အခါတိုင်းအဲဒီမှာနောက်ကျော browse နိုင်ပါတယ်။
ဖုန်း Space ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်စေ
အစာရှောင်ခြင်းသိုလှောင်မှုနေရာလွတ်မှဖြောင့်မီနူးမှသင်၏ cache ကိုရှင်းလင်းပါ။ ဒါမှမဟုတ် setting တွင်တစ်ဦးအမြန်လှန်သဖြင့်, သင်သည်ဖြောင့်ထားတဲ့ SD ကတ်ဖို့သင့် cache နဲ့ downloads, ကယ်တင်နိုင်ပါ။
တစ်ခုတည်း tab ကိုအညွှန်း, မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်စင်တာဇာတ်စင်မှာရှာဖွေရေးဘားနှင့်မီနူးနှင့်အတူ, သင်ပြုချင်သမျှကိုပင်တဦးတည်းလက်နှင့်သင်၏လက်ချောင်းထိပ်မှာမှန်သည်။
Mozilla ကလူရဲ့လက်၌ web ၏ပါဝါကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဆက်ကပ်အပ်နှံသည်။
ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိုယ်စားတီထွင်ဖို့လုပ်ဆောင်နေသုံးစွဲသူများမျှဝေသူနှင့် developer တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းပါပဲ။ သငျသညျ Firefox ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ, သင်ကို Web သည်တောက်ပသောအနာဂတ်တည်ဆောက်ကူညီပေးနေသောအသိုင်းအဝုိင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
Firefox ကို Rocket - မြန်နှင့် Lightweight
မော်ကွန်းတိုင် Browser ကို: ...